I-Alex ibumbene ifuna ubulungiswa ngokubulawa kukaJabulile | Scrolla Izindaba
I-Alex ibumbene ifuna ubulungiswa ngokubulawa kukaJabulile
Bangaphezu kwama-200 abantu abeze ukuzokhalisa futhi bavalelise okokugcina entombazaneni yase-Alexandra ebulewe uJabulile Nkosi ngoMgqibelo.
Kube nemizwa ebuhlungu nedabukisayo emngcwabeni kaNkosi otholwe eseshonile enenxeba lokudutshulwa emabhange ase-Jukskei River e-Alexandra ngeSonto eledlule.
Lo mfundi webanga le-12 obekufanele agubhe usuku lwakhe lokuzalwa lweminyaka eyi-19 izolo (ngoLwesihlanu mhla zi-11 kuMandulo), ulethe ubumbano e-Alexandra lapho wonke umuntu ufuna #UbulungiswabukaJabulile.
NgoLwesihlanu ebusuku, izangoma zenze imikhuba yazo, abafundisi bathandaza, kwaqoqwa izingane zesikole futhi umphakathi wahlangana emcimbini wokukhanyiswa kwamakhandlela obuhlelwe yi-30 Strong Voices of Alexandra, iqembu elilwa nezinkinga zomphakathi kuleli lokishi.
UVincent Ndima, uKaputeni wasemgaqweni waleli qembu uthe bahlele umcimbi wokukhanyiswa kwamakhandlela oqale esikoleni sakhe.
“Njengamalungu e-30 Strong Voices of Alex sathembisa ukuxhasa umndeni nabathandekayo bakaJabulile Nkosi owabulawa ngesihluku lapha e-Alexandra,” kusho uVincent.
Umndeni uthi unethemba lokuthi uzothola ubulungiswa ngentombazanyana ebifuna ukuba nguchwepheshe we-IT kanye noSonhlalakahle.
Khonamanjalo, amaphoyisa abophe umshayeli wetekisi wendawo ohlanganiswe nobufakazi kulokhu kubulala.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uKaputeni uKay Makhubele, uthe ubufakazi bokuqala buxhumanise umshayeli wetekisi oneminyaka engama-25 ubudala nokubulala.
“Umsolwa uvele eNkantolo yeMantshi yase-Alexandra ngoLwesine lwangomhla zi-10 kuMandulo kunyaka wezi-2020, icala lahlehliselwa isonto ukuze kuqhutshekwe nophenyo, umsolwa usagcinwe esitokisini samaphoyisa,” kusho uMakhubele.
UJabulile ufihlwe emathuneni ase-Waterfall ngase-Midrand.